Rio 2016: Maxamed Farax oo labaystay iyo Brazil oo Dahabkii u horreeyay ku guuleysatay – Kasmo Newspaper
Rio 2016: Maxamed Farax oo labaystay iyo Brazil oo Dahabkii u horreeyay ku guuleysatay
Updated - August 21, 2016 9:01 am GMT
Iyada oo lagu jiro maalintii u dambaysay cayaaraha Olimbikada Rio 2016, orodyahan Maxamed Faarax ayaa mar kale difaacday horyaalkii orodka 5ta kun oo mitir, isaga oo horey ugu guuleystay billaddii 10,000 oo mitir.
Waxaa uu ka badiyay orodyahannada Paul Chelimo oo Maraykan ah iyo Hagos Kebrihet oo Itoobiya ah oo 2aad iyo 3aad kala galay, sida ay isugu xigaan.
Waa markii 2aad oo Maxamed Faarax ku guulaysanayo lammaanaha Dahabka oroddada tan iyo Olimbikadii London, sannadkii 2012kii.
Dhanka kale Xulka kubbadda cagta Brazil ayaa ku guulaysatay billaddii Dahabka Olimbikada,markii ay kaga adkaatay xulkii Jarmalka,Gool ku-laad 6-5 oo xiddigga Neymar saxiixay,ka dibna farxad la ilmeeyay,80,000 oo daawadayaal ah hortooda.
Dalka Brazil, billaddii Dahab ah ee ugu horreysay abid, taariikhda kubbadda cagta Olimbikada, waxaa ay ka mayraysaa,qayb ahaan,xusuustii xumayd ee cayaarihii koobka Adduunka ee 2014kii.
Markaas oo xulka Jarmalku ku garaaceen gurigooda dhexdiisa,nus-dhammaadkii,iyaga oo uga badiyay 7-1 Gool.Laakiin guushan ayaa ku timid Gool ku-laad 5-4,ka dib markii ay 1-1 isla dhaafi waayeen 120kii daqiiqo ee caadiga ahaa.
Neymar ayaa daqiiqaddii 27aad ee qaybtii hore saxiixay Gool,farsamo ahaan la sheegay in uu yahay midka ugu qiimaha badan intii ay Olimbikadu socotay,isaga oo qudhiisa kasbaday fursadda,culays badan oo la saaray iyo xadgudubyo badan oo loo gaystay,oo u sahashay in uu helo gool ku-laadka.
Neymar da Silva Santos oo dhashay 5tii Febrayo 1992kii,waxaa uu iska casilay xilkii Kabtanka Xulka Qaranka,gabagabadii waraysi uu bixiyay markii cayaartu dhammaatay,taas oo ahayd mid an la filayn.
Cayaaraha Olimbikada Rio 2016 oo soo socday 3 toddobaad, waxaa la soo gabagabayn doonaa caawa saqda dhexe, wakhtiga Uk, xafladda gunaanadka oo ka dhici doonta garoonka Maracana ee Rio de Janeiro, oo ah halkii markii hore lagu furay.